तपाईंको कम्पनीले कति चार्ज गर्छ? | Martech Zone
तपाईंको कम्पनीले कति चार्ज गर्छ?
सोमबार, सेप्टेम्बर 22, 2008 सोमबार, सेप्टेम्बर 22, 2008 Douglas Karr
त्यहाँ केवल एउटा वाल-मार्ट छ। वाल मार्ट एक कम्पनी हो कि केवल एक मूल्य प्रस्ताव छ: सस्तो मूल्य। यसले वाल-मार्टसँग काम गर्दछ किनकि उनीहरूले अर्को खुद्रा आउटलेट भन्दा सस्तो समान उत्पादन बेच्न सक्दछन्।
तपाईं वाल मार्ट हुनुहुन्न। तपाइँ काममा जान सक्नुहुन्न कसरी प्रत्येक दिन मूल्यहरु घटाउने भनेर थाहा पाउन। न त तपाईंले गर्नु पर्छ। तपाईंको कम्पनी अद्वितीय छ र केहि अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गर्नु पर्छ।
तपाईंको मार्केटिंग लक्ष्य हुनुपर्दछ फरक पार्नुहोस् आफूलाई प्रतिस्पर्धाको बीचमा। प्रतिस्पर्धा नगर्नुहोस्! तपाइँको बारेमा के फरक छ र तपाइँको सम्भावनाको आवश्यकताहरूमा कसरी फिट हुन्छ फेला पार्नुहोस्। सन्दर्भहरू र पहिलो-व्यक्ति खाताहरूको साथ तपाईंको संभावनाहरू प्रदान गर्नुहोस् कसरी तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको लागि डेलिभर गर्नुभयो।
त्यहाँ तीन प्रकारका कम्पनीहरू छन्:
कम्पनीहरू जसले अन्डरडिलीभर = ओभरचार्ज
कम्पनीहरू जसले डेलिभर गर्छन्
कम्पनीहरू जसले डेलिभर गर्छन् - अण्डरचार्ज
IMHO, यी हुन् मात्र व्यवसाय को प्रकारहरु। कम्पनीहरू जसले डेलिभर गर्छन् सक्दैन अधिक शुल्क, तपाईंले तिर्नु पर्ने मूल्य डेलिभरीको हिस्सा हो। दुई सर्तहरू एक अर्काको पर्यायवाची छन्।
कम्पनीहरू जसले डेलिभर गर्छन् रकम रकम तिर्दछन् जुन उनीहरूले प्रदान गर्छन्। धेरै जसो कम तपाईं सायद तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ।
मैले विक्रेताहरू देखेको छु जुन सयौं हजारौं डलर खर्च भएको छ, तर मूल्यमा त्यो अंशको केही अंश मात्र डेलिभर गरेको छु। मसँग मेरा साथीहरू छन् जसले घनिष्ट रूपमा डेलिभर गरेका छन् अझ बढी मूल्य तर तिनीहरू लामो रहन संघर्ष।
तपाईं वाल मार्ट हुनुहुन्न, यसैले आफैलाई मूल्य निर्धारण गर्न रोक्नुहोस्। तपाईं अधिक योग्य हुनुहुन्छ।
टैग: एडेलोनोहब्रान्ड पत्रकारिताचान्डलरफ्रेटरप्रचारmobbaseमोबाइल संगीतसंगीत मोबाइल अनुप्रयोगmyasinनीलबरम्यानSpotifyकहानी
मोबाइल Textarea: कति वर्णहरू बाँकी
सेप्टेम्बर १,, २०११ 26::2008० अपराह्न
आमेन डग! म वास्तवमै बढी कुरा गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ यो दु: खी छ कि समाजको रूपमा हामी PRICE को साथ यति व्याकुल भएका छौं। वास्तविक VALUE देखाउन यो यत्ति गाह्रो हुन्छ! केवल चाँदीको अस्तर भनेको यदि तपाईं साच्चै आफ्ना ग्राहकहरूको लागि डेलिभर गर्नुहुन्छ (किनभने धेरै कम्पनीहरू छैनन्) उनीहरूले तपाईंको सेवालाई मूल्यवान् पार्नेछन् र (आशा छ) यो अरूलाई सुझाव दिनुहुन्छ। मूल्य र मूल्य बीचको प्रमुख भिन्नकर्ता वास्तवमै मार्केटिंग हो।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 27::2008० अपराह्न
विडम्बना भनेको के हो कि मूल्यको बारेमा मानिसहरुको जुनसुकै प्रकारले उनीहरूलाई धेरै खर्च गर्न पुर्‍याउँछ - विशेष गरी जब उनीहरूले भुक्तानी गरेको रणनीतिहरू असफल हुन्छन् र उनीहरूले असफलताको सामना गर्न बढी खर्च गर्नुपर्दछ।
सेप्टेम्बर 27, 2008 मा 10: 59 AM
राम्रो पोस्ट डग र स्पटमा। म जहिले पनि मेरो प्रतिस्पर्धीहरू बिच भिन्नता राख्न खोजिरहेको छु र केहि रमाईलो तरीकाले गम्भीर व्यक्तिहरूको साथ गर्न प्रयास गर्दैछु। यो काम देखिन्छ।
मैले हालसालै एउटा प्रोजेक्टको लागि खोजेको छु र म १००% विश्वस्त छु कि म फ्रेमका अन्य व्यक्तिहरू भन्दा राम्रो र अधिक काम सिध्याउनेछु। यो तल जान्छ £££ र साथै उनीहरू चाहिँ "परामर्शदाता" वा ठूलो एजेन्सी चाहन्छन्।